Ogaden News Agency (ONA) – Qoomiyada Konso oo Kamid Noqotay Qoomiyadaha Kukacsan Wayaanaha.
Qoomiyada Konso oo Kamid Noqotay Qoomiyadaha Kukacsan Wayaanaha.
Posted by Dulmane	/ May 26, 2016
Wararka aan kahelayno caasimada gumaysiga Ethiopia ee Adis-ababa ayaa sheegaya in ay kacdoon aad u wayn bilaabeen dadwaynaha kasoo jeeda qoomiyada Konso oo dagta Gobolka looyaqaano shucuubta Koonfureed.
Warkan oo aan kahelay ilo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in ay qoomiyadu bilowday kacdoon aad u xoog badan oo ay kaga soo horjeedaan taliska macangaga ah ee wayaanaha oo nolashii ku cidhiidhyay. Sida warku tilmaamayo dadwayne aad u cadhaysan oo u dhashay qoomiyada Konso ayaa isugu soobaxay wadooyinka magaalooyinka waxayna bilaabeen mudaharaad rabshado wata iyagoo ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah taliska TPLF ee xooga ku haysta talada wadanka.
Kacdoonka qoomiyada Konso ayaa xoojinaya kacdoono aad ubadan oo qaybaha wadanka kasocday sida Oromia, Tigrey, Gambela, Bimshangul iyo wadanka Ogadenia oo inta laxasuusto uu kasocday kacdoon dadwayne.
Kacdoonka qoomiyada Konso ayaa ka dambeeyay kadib markay ciidanka gumaysigu xidhay, dil, iyo jidhdil ugaysteen dadka shacabka ah ee qoomiyada waxayna dadka cadhaysan ee qoomiyadu xabsiyada gobolkooda xoog uga soo daayeen 47 qof oo kamid ah shacabkii la qafaashay.
dadka shacabka ah ee Qoomiyada Konso ayaa sheegay in ay kacdoonka siiwadi doonaan ilaa iyo intay kagaadhayaan guushooda oo ay ku sheegeen in ay xornimo gaadhsiiyaan dadkooda iyo dalkooda.